IWU MAKA "EXECUTE" MENU WINDOWS 7-10, NA-AGBALITE MMEMME ZORO EZO - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Mgbe ị na-edozi nsogbu dịgasị iche iche na Windows, ọ na-adịkarị mkpa ime ngwa dị iche iche site na menu "Run" (na-ejikwa mpaghara a, ị nwere ike ịme ihe ndị ahụ na-ezoghị na nlele).
Otú ọ dị, a pụrụ ịme ụfọdụ mmemme iji Windows Control Panel, mana dịka iwu, ọ na-ewe ogologo oge. N'ezie, ihe dị mfe, tinye otu iwu ma pịa Tinye ma ọ bụ mepee 10 taabụ?
N'okwu ndị m na-atụ aro, m na-ekwukarị banyere iwu ụfọdụ maka ịbanye na ha, wdg. Ọ bụ ya mere e ji kpaa echiche ahụ iji mepụta obere akwụkwọ ederede na iwu kachasị mkpa na nke a na-ewu ewu nke ị na-ejikarị agba ọsọ. Ya mere ...
Ajụjụ nke mbụ 1: esi mepee menu "Run"?
Ajụjụ ahụ nwere ike ọ gaghị adị mkpa, ma bụrụ naanị, tinye ebe a.
Na Windows 7 A na-arụ ọrụ a n'ime menu START, dịka mepee ya (nseta ihuenyo n'okpuru). Ịnwekwara ike ịbanye iwu dị mkpa n'ime usoro "Nchọpụta ihe na faịlụ".
Windows 7 - menu "START" (clickable).
Na Windows 8, 10, pịa pịa bọtịnụ Mmeri na R, mgbe ahụ, windo ga-ebute n'ihu gị, nke ị chọrọ ịbanye iwu na pịa Tinye (lee nseta ihuenyo n'okpuru).
Nchikota bọtịnụ Win + R na keyboard
Windows 10 - Nchịkọta nhọrọ.
Ndepụta nke iwu ndị a na-ewu ewu maka menu "EXECUTE" (n'usoro mkpụrụ edemede)
Echere m na ọ dịghị ihe ọ bụla ebe a. Site na itinye iwu a, ịnwere ike ịmalite ihe nchọgharị Ịntanetị, nke dị na mbipụta nke Windows ọ bụla. "Gịnị mere ị ga-eji mee ya?" - ị nwere ike ịjụ. Ihe niile dị mfe, ọ dịkarịa ala iji budata ihe nchọgharị ọzọ :).
Nye iwu: mspaint
Na-enyere aka ịmepụta nchịkọta akụkọ na-ewu ewu n'ime Windows. Ọ bụghị mgbe nile (dịka ọmụmaatụ, na Windows 8) iji chọọ onye nchịkọta akụkọ n'etiti taịlị, mgbe ị nwere ike ịme ya ngwa ngwa.
Nye iwu: dee
Ezigbo nchịkọta akụkọ. Ọ bụrụ na e nweghị Microsoft Okwu na PC, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe.
Nye iwu: ichikota njikwa
Iwu bara uru mgbe ị na-eguzobe Windows.
5) Ndabere ma weghachite
N'iji ọrụ a, ị nwere ike ịmepụta ma ọ bụ weghachi ya. Ana m akwado, ọ dịkarịa ala mgbe ụfọdụ, tupu ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala, mmemme "enyo," na-edekwa Windows.
6) Akwukwo ozi
Nye iwu: ihe ntinye
Akwụkwọ ederede dị na Windows. Mgbe ụfọdụ, karịa icho maka akara ngosi ahụ, ị ​​nwere ike ịme ya ngwa ngwa na iwu dị otú ahụ dị mfe.
Nye iwu: firewall.cpl
Ntọala ederede wuru na firewall na Windows. Ọ na-enyere ọtụtụ aka mgbe ịkwesịrị iwepụ ya, ma ọ bụ nye ohere na netwọk na ngwa ụfọdụ.
8) Nweghachi usoro
Ọ bụrụ na PC gị ejirila nwayọọ nwayọọ, gụchaa, wdg. - Ọ ga-ekwe omume ịgbanye ya n'oge ọ bụla ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma? N'ihi mgbake, ị nwere ike idozi ọtụtụ njehie (ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ mmemme nwere ike ịla n'iyi.
Ụkọ akụkọ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị mkpa mgbe a na-agbanye ihe menu START (dịka ọmụmaatụ), ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime ya (nke a na-eme mgbe ị na-etinye mgbakọ os dị iche iche os site n'aka "ndị omenkà").
10) Ụbọchị na oge
Nye iwu: timedate.cpl
Maka ụfọdụ ndị ọrụ, ọ bụrụ na akara ngosi ahụ na oge maọbụ ụbọchị ahụ na-apụ, ụjọ ga-amalite ... Iwu a ga - enyere gị aka ịtọ oge, ụbọchị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị akara ngosi ndị a na tray (mgbanwe nwere ike ịchọ ka onye nchịkwa).
Ime ihe a na-enyere aka mee ka usoro nchekwa gị dị elu. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka diski na faịlụ FAT (NTFS bụ ihe na-enweghị ike iwepụ - ya bụ, ọ naghị emetụta ọsọ ọsọ ya). N'ihe nkowa banyere nbaghasị ebe a:
12) Manager Windows Task
Nye iwu: taskmgr
Site n'ụzọ, a na-akpọkarị onye njikwa ọrụ na Ctrl + Shift + bọtịnụ Esc (dịka ọ bụrụ na enwere nhọrọ abụọ) :).
13) Njikwa Ngwaọrụ
Nye iwu: devmgmt.msc
Ntughari ozi bara uru (na iwu n'onwe ya), ị ga-emeghe ya ọtụtụ mgbe maka nsogbu dị iche na Windows. Site n'ụzọ, imeghe onye njikwa ngwaọrụ, ị nwere ike "ịchọta gburugburu" ruo ogologo oge na panel ahụ, mana ị nwere ike ime ya ọsọsọ ma dị mma nke a ...
14) Gbanyụọ Windows
Denye iwu: imechi / s
Iwu a bụ maka kọmputa na-emechi windo. Bara uru na ikpe ebe menu Malite adịghị anabata gị na ịpị.
Ntọala ntọala ụda (enweghị nkọwa ndị ọzọ).
16) Ngwa egwuregwu
Nke a dị ezigbo mkpa mgbe ị jikọtara ọmarịcha ọṅụ, wiil ụkwụ, wdg. Ị gaghị enwe ike ịlele ha ebe a, mana ha ga-ahazi ha maka ịrụ ọrụ zuru ezu.
Ntugharị dị otú ahụ dị mfe nke na-enye aka na-enye aka chekwaa oge (karịsịa na Windows 8 ma ọ bụ maka ndị ọrụ ebe eburu ụzọ mkpirisi niile).
18) Iwu iwu
Otu n'ime iwu ndị kacha baa uru! A na-achọkarị iwu iwu mgbe ị na-edozi ụdị nsogbu niile: na diski, na os, na nhazi netwọk, nkwụnye ihe, wdg.
19) Nhazi usoro
Nye iwu: msconfig
Dị mkpa taabụ! Ọ na-enyere aka ịtọlite ​​mmalite Windows OS, họrọ ụdị mmalite, ezipụtaghị mmemme ndị a ekwesịghị ịmepụta. N'ozuzu, otu n'ime taabụ maka ntọala OS zuru ezu.
20) Nyochaa Ngwa na Windows
Iwu: perfusion / res
Eji ya iji chọpụta ma chọpụta ikpere arụmọrụ: diski ike, netwọk netwọk, wdg. Na n'ozuzu, mgbe PC gị kwụsịrị - Ana m akwado ile anya ebe a ...
21) Ikekọrịta nchekwa
Nye iwu: fsmgmt.msc
N'ọnọdụ ụfọdụ, karịa ịchọ ebe ndị nchekwa ndị a na-akọrọ, ọ dị mfe igbanye otu iwu wee jiri obi ụtọ ma hụ ha.
22) Cleanup Disk
Ikpochapụ diski site na faịlụ ndị "junk" nwere ike ọ bụghị naanị ime ka ohere ohere dị na ya, kamakwa ọ na-eme ka arụmọrụ nke PC dum dị oke. N'eziokwu, onye na-ehicha ụlọ adịghị mma, ya mere ana m akwado ndị a:
23) Ogwe njikwa
Ọ ga - enyere aka mepee panelịchị Windows akara ngosi. Ọ bụrụ na egosiri mmalite amalitere (ọ na - eme, na nsogbu na onye ndu / onye nyocha) - n'ozuzu, ihe dị oke mkpa!
24) Ndaba nchekwa
Iwu ọsọ ọsọ imeghe folda nbudata. Na nchekwa nchekwa a, Windows na-ebudata faịlụ niile (ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ebe Windows ka chekwara faịlụ ahụ ebudatara ...).
25) Nhọrọ Nhọrọ
Nye iwu: ichikota nchekwa
Ịtọghe oghere nke nchekwa, ngosi, wdg oge. Ọ dị ezigbo mkpa mgbe ịkwesịrị ịmepụta ọrụ na ngwa ngwa.
Iwu: nkwụsị / r
Degharịa kọmputa. Ntị! Kọmputa ahụ ga-amalitegharịa ozugbo n'enweghị ajụjụ ọ bụla, banyere ịchekwa data dị iche iche na-emeghe ngwa. A na-atụ aro ịbanye iwu a mgbe "ụzọ" nkịtị iji malitegharịa PC anaghị enyere aka.
27) Ihe nlekọta ọrụ
Iwu: chịkwaa schedtasks
Ihe bara ezigbo uru mgbe ịchọrọ ịtọ oge maka ịme ihe ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ịgbakwunye ụfọdụ ihe omume iji budata na Windows ọhụrụ - ọ dị mfe ime nke a site na Task Scheduler (gosipụtakwa ole nkeji / sekọnd iji malite nke a ma ọ bụ usoro ahụ mgbe ị gbanyechara PC).
28) Lelee diski
Mega-bara uru! Ọ bụrụ na e nwere njehie na diski gị, Windows anaghị ahụ ya, ọ naghị emeghe, Windows chọrọ ịkọ ya - emela ngwa ngwa. Gbalịa lelee ya maka njehie mbụ. Ọtụtụ mgbe, iwu a na-echekwa data ahụ. Enwere ike ịchọta nkọwa gbasara ya n'isiokwu a:
Nye iwu: onye nyocha
Ihe niile ị na-ahụ mgbe ị na-agbanye kọmputa: desktọọpụ, ọrụ ọrụ, wdg. - nke a niile na-egosiputa onye nyocha, ma ọ bụrụ na ị mechie ya (usoro onye nyocha), mgbe ahụ naanị ihuenyo ojii ga-apụta. Mgbe ụfọdụ, onye na-eme nchọpụta na-adabere na mkpa ka a malitegharịa. Ya mere, iwu a bu ezigbo ewu ewu, ana m akwado ya ka o cheta ...
30) Mmemme na components
Nke a ga-enye gị ohere ịmara onwe gị na ngwa ndị ahụ arụnyere na kọmputa gị. Enweghị mkpa - ị nwere ike ihichapụ. Site n'ụzọ, ndepụta nke ngwa nwere ike ịhazi site na ụbọchị nrụnye, aha, wdg.
31) Mkpebi ihuenyo
Aabụ na ntọala ihuenyo ga - emeghe; n'etiti ndị isi, nke a bụ nyocha ihuenyo. N'ozuzu, ka ị ghara ịchọ ogologo oge na nchịkwa nchịkwa, ọ ga-aka ngwa ngwa itinye iwu a (ọ bụrụ na ị maara ya, n'ezie).
32) Nchịkọta N'uba nke Obodo
Nnukwu aka. N'ihi ndi nchịkọta iwu nke obodo ahụ, ị ​​nwere ike ịmezi ọtụtụ ederede na-ezo. M na-ezo aka na ya na isiokwu m ...
Onye ọzọ na-enyere aka. N'ihi ya, ị nwere ike ngwa ngwa mepee ndekọ ahụ. Na ndekọ ahụ, ọ dị mkpa iji dezie ozi ezighi ezi, hichapụ ọdụ ochie, wdg. N'ozuzu, yana nsogbu dịgasị iche iche na OS, ọ gaghị ekwe omume ịbanye "na ndekọ ahụ.
34) Ozi System
Nye iwu: msinfo32
Ihe bara uru bara uru nke na-ekwu n'ụzọ nkịtị ihe niile gbasara kọmputa gị: nsụgharị BIOS, ụdị iheadị motherboard, os os, ihe omimi ya, wdg. Enwere otutu ihe ọmụma, ọ bụghị n'efu ka ha na-ekwu na ọrụ a nwere ike ọbụna dochie ụfọdụ mmemme nke atọ nke ụdị a. Na n'ozuzu ya, were ya, ị gakwuuru kọmputa na-abụghị nkeonwe (ị gaghị arụnye ngwanrọ nke atọ, mgbe ụfọdụ, ọ gaghị ekwe omume ime ya) - ya mere, m malitere ya, na-ele ihe niile dị m mkpa, mechie ya ...
35) Njirimara System
Nye iwu: sysdm.cpl
Site na iwu a, ị nwere ike ịgbanwe ọrụ ọrụ nke kọmputa, aha PC, malite njikwa ngwaọrụ, gbanwee ọsọ, profaịlụ onye ọrụ, wdg.
36) Njirimara: Intaneti
Nye iwu: inetcpl.cpl
Nhazi zuru ezu nke ihe nchọgharị Internet Explorer, yana Internet dị ka dum (dịka ọmụmaatụ, nchekwa, nzuzo, wdg).
37) Njirimara: keyboard
Nye iwu: ichikota keyboard
Ntọala keyboard. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ime ka ọbụbụ ọnụ gị na-agbakarị ugboro ugboro.
38) Njirimara: Ụra
Iwu: chịkwaa òké
Dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ zuru ezu nke òké, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbanwe ọsọ nke na-agbagharị na wiil òké, gbanwee bọtịnụ aka nri aka ekpe, kọwaa ọsọ nke pịa ọnụọgụ abụọ, wdg.
39) Njikọ netwọk
Nye iwu: ncpa.cpl
Mepee taabụ:Ogwe njikwa Network na Internet & Njikọ Network. Aabụ bara uru mgbe ị na-edebe netwọk, mgbe enwere nsogbu na Ịntanetị, ihe ntanetị netwọk, ndị ọkwọ ụgbọala netwọk, wdg. N'ikpeazụ, otu ìgwè dị mkpa!
Dị mkpa taabụ! Na-enye gị ohere ịhazi ọtụtụ ọrụ: gbanwee ụdị mmalite ha, nye aka, gbanyụọ, wdg. Na-enye gị ohere imepụta Windows maka onwe ha, si otú ahụ meziwanye arụmọrụ nke kọmpụta (kọmpụta) gị.
41) Ngwa nyocha DirectX
Iwu bara oke uru: ị nwere ike ịchọpụta ihe nlereanya nke CPU, kaadị vidiyo, ụdị DirectX, hụ ihe ihuenyo, nyocha ihuenyo na àgwà ndị ọzọ.
42) Njikwa Diski
Ihe ọzọ bara uru. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ niile mgbasa ozi ejikọrọ na PC - na-enweghị iwu a n'ebe ọ bụla. Ọ na-enyere usoro mgbasa ozi aka, mebie ha na ngalaba, resize akụkụ, mpịakọta akwụkwọ ozi, wdg.
43) Nchịkọta Kọmputa
Ntọala dịgasị iche iche: njikwa diski, nhazi ọrụ, ọrụ na ngwa, wdg. N'okwu a, ị nwere ike icheta iwu a, nke ga-eji dochie ọtụtụ ndị ọzọ (gụnyere ndị e nyere n'elu n'elu isiokwu a).
44) Ngwaọrụ na Mpịakọta
Nye iwu: ijikwa ndị na-ebi akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị nwere onye nbipute ma ọ bụ nyocha, mgbe ahụ, taabụ a ga-adị oké mkpa maka gị. Maka nsogbu ọ bụla na ngwaọrụ - M nwere ike ikwu na ịmalite site na taabụ a.
45) Akaụntụ Ndị Akaụntụ
Na taabụ a, ịnwere ike ịgbakwunye ndị ọrụ, dezie ihe ndekọ dị ugbu a. Ọ dịkwa uru mgbe ịchọrọ iwepu paswọọdụ mgbe ị na-agbanye Windows. N'ozuzu, n'ọnọdụ ụfọdụ, taabụ dị ezigbo mkpa.
Ihe dị mma, ma ọ bụrụ na igodo ọ bụla na keyboard gị anaghị arụ ọrụ maka gị (ma ọ bụ na ịchọrọ ịchọta igodo ndị ị na-ede site na ihe omume spyware dị iche iche).
47) Enyemaka Ike
Nye iwu: powercfg.cpl
Eji iji hazie ike ọkọnọ: debe ihuenyo ihuenyo, oge tupu imechi (site na aka na batrị), arụmọrụ, wdg. N'ikpeazụ, ọrụ nke ọtụtụ ngwaọrụ na-adabere na ike ọkọnọ.
Ịga n'ihu ... (maka mgbakwunye - ekele na mbu).